Revue des blogs – Malag@sy Miray
L’Edito de ce jour sur Sobika et commenté par NJ nous interpellent sur la dégradation morale et éthique de la qualité de l’enseignement ainsi que l’image que le régime actuel veut se donner.A titre de rappel, le sujet de rédaction de la matière « Malagasy » peut être traduit comme suit : » Misy ezaka ataon’ny fitondrana tetezamita hampandroso haingana ny firenena amin’izao fotoana izao. Inona avy ireo ezaka ireo araka ny hevitrao? ( La Transition fait des efforts pour développer rapidement le pays en ce moment. Quels sont ces efforts selon vous ? ) Si on souhaite analyser le pourquoi et l’intérêt d’un tel sujet on pourrait avoir des questions constructivistes comme : Est-ce pour découvrir si…
Taona 2008, Volana janoary. E? Nisy nahatsikaritra ve ianareo fa tamin’ny 09:47 ny lahatsoratra voalohany nosoratan’i mpiblaogy? Dia tsy haiko aloha nareo an, fa isan’andro kosa teo aloha teo tsy maintsy mba nangitakitaka ihany niandry ny valin’i bestofmalagasyblogs e. Ny nampilay an’io fifaninana io dia nahitana mpitoraka bilao-gy be dia be an; misy mpilalao fanafody ohatra, na mpankafy hainteny sady amizay ve nama misy mihitsiny ny blaogy koudékera! Tsy maintsy hiezaka be ihany izany ny taigna amin’ity sao mba hisy hifidy ihany. Fa raha ohatra aloha hoe hizara bulletin toy ireny taloha ireny an, dia ny ahy no nofidiko dia ireto e: – sampana koltoraly dia i tnr, mety lany…
Ikalakely	6 Commentaires
Lohahevitra maromaro tokoa no nobanjin’ny mpamaham-bolongana (mpiblaogy hoy ny maro) Malagasy nandritra iny volana Novambra iny. Ny resaka momba ny baolina fandaka, ny vehivavy, ny delestazy miaraka amin’ny jirama ary zavatra hafa koa no hamahanako anareo eto aloha. Voalohany dia hiainga amin’ny zavatra tsy ankafizin’ny vehivavy loatra aloha koa aza tsiny indrindra re. Ilay ho ankafizinareo ihany manko no horesahina faharoa (ha!ha!). Tafita tamin’ny dingan’ny savaranonando eo amin’ny sehatry ny baolina fandaka manko ny ekipam-pirenentsika rehefa nanamontsana ny nosy Komoro eo avaratra andrefan’i Madagasikara eo. Nanamarika avy hatrany i DotMG fa karazan’ny « soavaly be tongotra » isika Malagasy rehefa hiditra amin’ny fifaninanana isam-bondrona. Anisan’ny laharana faramparany manko isika ary…